Uqeqesho kunye neZatifikethi
Zonke iiCandelo loQeqesho noQeqesho
I-Technology Source evulekile ngenye yeeteknoloji esetyenziswa kakhulu kwilizwe lanamhlanje kwaye i-Redhat ilawula kwiimeko ezikhuselekile zeseva. I-Redhat inikezela ngeendlela ezahlukeneyo, uqeqesho kunye nesatifikethi sokwanda komntu ngamnye. Imisebenzi ehlanganiswe kwi-Red Hat System.
Ukusebenza kwimveliso yeMicrosoft kubalulekile nokuba kuhanjiswa okanye ukuhlanganiswa kweprojekthi, ngoko ke ngosizo lwethu loqeqesho siya kukusebenzisa ngokugqithiseleyo ukusebenzisa i-teknoloji ye-Microsoft kwaye ube ngumqeqeshi oqinisekisiweyo we-Microsoft. Ukuze uqonde indima ye-AD RMS idlala.
The ITIL (Ikhompyutheni yeeTeknoloji zoLwazi lweTeknoloji yezoLwazi) yenzelwe ukulungelelanisa ukhetho, ukucwangciswa, ukuhanjiswa kunye nenkxaso yeenkonzo ze-IT kwishishini. Injongo kukuphucula usebenze kwaye uphumelele amanqanaba enkonzo aqikelelweyo.
Inkokheli kwimfundo yokhuseleko lwe-cyber IYO offers accredited online cyber security degrees for advancing IT security careers.EC-Council is a global leader in InfoSec Cyber Security certification programs like CEH. India’s Leading Professional EC-Council.
Ezengqesho is used to describe both the people who work for a company or organization & the department responsible for managing related to employees.It is designed to maximize employee performance in service of an employer’s strategic objectives.
I-DevOps ithetha, umntu oqonda imisebenzi kunye nemisebenzi ekuphuhlisweni kodwa kumxholo wokuphuhliswa komsebenzi, uqhuba umbutho we-"Modern" Programmer Programme. I-DevOps amathuba omsebenzi ayanda.
Funda iinkqubo ezona zikhuselekileyo, ukuxhasa iinkqubo zezokhuseleko ze-IT kunye nomgaqo-nkqubo we-NIST, okanye ufumane i-PRotet Networks, iikhomputha, iiNkqubo, I-CISSP, i-CompTIA Security +, i-CASP, iziqinisekiso ze-CEH kunye nokunye!
I-CISCO iyinkokeli yehlabathi kwiNethiwekhi kunye nezixhobo zokuhamba. I-CISCO inika indlela epheleleyo yokusebenza kunye neziqinisekiso zayo ezifana neCCNA, iCCNP neCCIE .Inika umxube we-teknoloji wakutshanje.
Digital urhwebo yinqanaba lentengiso elisebenzisa iteknoloji yedijithali ukubeka nokuthengisa iimveliso. It lidlula i-intanethi urhwebo ukubandakanya iziteshi ezingafuneki ukusetyenziswa kwe-intanethi.
Ulawulo lweprokjekthi Uqeqesho lokuqalisa, ukucwangcisa, ukuqhuba, ukulawula, nokuvala umsebenzi weqela ukufezekisa iinjongo ezithile kunye nokuhlangabezana nemigangatho ethile yokuphumelela ngexesha elithile.
uvavanyo ubuchule buquka inkqubo yokuqhuba inkqubo okanye isicelo ngenjongo yokufumana isoftwe iibhugi (iimpazamo okanye ezinye iziphoso), kwaye ziqinisekisa ukuba isoftwe umveliso ulungele ukusetyenziswa.
Ulawulo lwenkqubo yinxalenye ebalulekileyo yenkqubo yanamhlanje yokusebenza (OS). I-OS kufuneka ibonelele izibonelelo iinkqubo, vumela iinkqubo ukwabelana kunye nokutshintshisiswa kolwazi, ukhusela izibonelelo ngamnye inkqubo kwamanye iinkqubo.
Fumana iikhompyutheni ze-IT ezifunekayo njenge: F5 GTM, Primavera P6, Integration Data. Funda izakhono ezintsha, ulungiselele izatifikethi kwi-intanethi kwaye unikeze uqeqesho oluqinileyo ukukunceda abathuthukisi, i-IT Professionals.